हुन्डाई भेन्यू आईएमटी र भेन्यू १.२ एस प्लस नेपालमा, कति पर्छ मूल्य ? — Arthatantra.com
Arthatantra.com > अटो > हुन्डाई भेन्यू आईएमटी र भेन्यू १.२ एस प्लस नेपालमा, कति पर्छ मूल्य ?
काठमाडौं । हुन्डाई गाडीको नेपालको लागि आधिकारीक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टर कन्टिनेन्टल प्रा.लिले हुन्डाई भेन्यू आईएमटी र हुन्डाई भेन्यू १.२ एस प्लस नेपालमा आएको छ ।
हुन्डाई भेन्यू आईएमटी र हुन्डाई भेन्यू १.२ एस प्लस टू भिन्न इन्जिन अप्सनमा उपलब्ध रहेको छ । १.२ लिटर पेट्रोल इञ्जिन कप्पा डुअल भीटीभीटी टेक्नोलोजी रहेको छ । १.० टर्बो पेट्रोल इञ्जिन कप्पा डुअल भीटीभीटी टेक्नोलोजी रहेको छ ।
बजारमा उपलब्ध अरु गाडिहरुको तुलनामा अघिल्लो बर्ष सार्वजनिक गरिएको हुन्डाई भेन्यूले बजारमा आफ्नो दह्रो उपस्थिति जनाएको छ । हुन्डाइ भेन्यू स्मार्ट शार्क फिन एन्टिना, टर्न सिग्नल भएका विद्युतले मिलाउन सकिने रिअर मिरर, इलेक्ट्रीक सन रुफ, आकर्षकफ्रन्ट ग्रील तथा स्पोर्टी रुफ रेलले सु-सज्जित रहेको छ ।
यसको आर १५ डायमण्ड कट एलोइ पाङ्ग्रा तथा रिअर क्यामेराको साथ हिल एसिष्ट कन्ट्रोलले नौलो र उत्साहजनक सवारी अनुभव दिनेछ । हुन्डाई भेन्यू १.२ एस प्लसमा बत्तीहरुको जडान सुन्दर तथा आधुनिक रुपमा गरिएको छ, । जस अन्तर्गत कर्नरिङ्ग लाइट, प्रोजेक्टर फग लाइट तथा व्रिmष्टल इफेक्ट सहितको लिड डीआरएल लाइट विशेष छन् ।
इन्टेलिजेन्ट म्यानुअल ट्रान्समिशनको साथ हुन्डाई भेन्यू आईएमटीले क्लचलेस ड्राइभिङ्ग अनुभव दिन्छ । सो सेगमेन्टमा नयाँ आईएमटीसँग क्लच प्याडल नभएकाले राम्रो ईन्धन दक्षता र मजाको ड्राईभिङ्ग अनुभव गर्न पाईन्छ ।
उत्कृष्ट यात्राको अनुभव गराउन, हुन्डाई भेन्यू आईएमटी र हुन्डाई भेन्यू १.२ एस प्लसमा नवीनतम विशेषताहरु जस्तै रियोस्ट्याट सहितको एड्भान्स सुपरभिजन क्लस्टर, ड्राईभर रेर भ्यू मिरर, भेहिकल स्टेबिलिटीे म्यानेजमेन्ट तथा इलेक्ट्रोनिक स्टेबिलिटी कन्ट्रोल रहेका छन् । जसले हुन्डाई भेन्यूू आईएमटी र हुन्डाई भेन्यू १.२ एस प्लसलाई एउटा सुरक्षितयात्राको सहयात्री बनाएको छ ।
हुन्डाई भेन्यू आईएमटी र हुन्डाई भेन्यू १.२ एस प्लसथप विशेषताहरुमा वायरलेस फोन चार्जर, व्रज कन्ट्रोल, टेलेमेटिक्स सहितको २०.३२ सेन्टिमिटरको एच डी डिस्प्ले, एअर प्युरिफायर तथा रियर ए सि भेन्ट रहेको छ । यी गाडीहरुको शुरुवाती मूल्य हुन्डाई भेन्यू १.२ एस प्लसको मूल्य ४४ लाख ५६ हजार रुपैयाँ र हुन्डाई भेन्यूू आईएमटीको बजार मूल्य ४४ लाख ९६ हजार रुपैयाँ रहेको छ । लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिले नेपाल भरी १३ शोेरुमहरु तथा १७ सर्भिस सेन्टरहरु मार्फत ग्राहकहरुलाई सेवा दिएरहेको छ ।
२०७७ फागुुण २७ गते १३:४० मा प्रकाशित
ज्योति विकास बैंकले बोन्ड निष्काशन गर्ने, कति पाइन्छ ब्याजदर ?
भूकम्पपीडितले पाउने भए पहिलो किस्तामै रु डेढ लाख !
अपिले ल्याउँदैछ २ सय प्रतिशत हकप्रद सेयर
बुधबार ३.५ अंकले उकालो लाग्यो नेप्से
७०% लाभांश पारित गर्दै लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशनको सकियो साधारण सभा